मान्छेको छालाको रंग किन सेतो, गहुँ गोरो, कालो हुन्छ? | samachar
मान्छेको छालाको रंग किन सेतो, गहुँ गोरो, कालो हुन्छ?
तपाईं हामीमध्येकै कतिपयको छाला सेतो, गहुँ गोरो, कालो, पहेंलो पहेंलो जस्ता विभिन्न खालका हुन्छन् । एउटै जातिका मान्छेहरुकै छाला पनि समान हुँदैनन् भने जाति पिच्छै नै छालाका रंगहरु झनै भिन्नाभिन्नै हुन्छन् । चर्को घाम लाग्ने स्थानमा बस्नेहरुको छालाको रंग बढी कालो हुन्छ भने, घाम कम लाग्ने स्थानका मानिसहरुको छालाको रंग पहेंलो पहेंलो वा सेतो हुन्छ ।
आखिर मान्छेको छालाको रंग किन यसरी भिन्नाभिन्नै भएको होला ? किन मानिसहरुको छालाको रंग एकै नभएको होला ?
मानिसको छालाको रंग कस्तो हुने भन्ने कुरा उसको शरीर र छालामा हुने रासायनिक प्रक्रियामा निर्भर गर्दछ । वास्तवमा, हाम्रा छालाका तन्तुहरुमा रंगका निश्चित आधारहरु हुन्छन्, जसलाई chromogens भनिन्छ । रोचक के छ भने, यो क्रोमोजेन आफैंमा चाहिँ रंगहीन हुन्छ । जब निश्चित फर्मेन्ट्स (ferments) वा इन्जाइम (enzymes) हरुको यी रंगका बेस (base) (एउटा खास रसायन)हरुसँग प्रतिक्रिया हुन्छ, तब हाम्रो छालाको निश्चित रंग निर्धारण हुन्छ । बेस भनेको त्यस्तो रसायन हो जसले अम्ल (acid) सँग प्रतिक्रिया गरेर लवण (salt) र पानी निकाल्दछ ।
जब कुनै कारणले मानिसको छालाको निश्चित भागमा वा पूरै छालामा त्यस्ता रंग–बेसहरु हुँदैनन् वा त्यससँग कुनै कारणले इन्जाइम वा फर्मेन्ट्सहरुको प्रतिक्रिया हुँदैन, त्यस अवस्थामा मान्छेको छालाको रंग पूरै सेतो हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई दुबी (albino) आएको भनिन्छ । यो संसारको जुनसुकै भागको मानिसलाई पनि हुन सक्छ । उदाहरणको लागि, सामान्यतः छाला अति कालो हुने दक्षिण अफ्रिकाको मानिसलाई समेत यो हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो मानिसको छाला गोरोभन्दा गोरो मानिसको छालाभन्दा पनि सेतो हुन्छ ।
त्यसो त रंग–बेसबिना नै पनि छालाको रंग सामान्यतः खैरो–सेतो रंगको हुन्छ । अझ छालामा हुने पहेलो पिग्मेन्ट (pigment) ले यसलाई पहेलो पहेलो रंग प्रदान गर्छ । छालामा नै पहेंलोबाहेक अर्को कालो रंगको पिग्मेन्ट पनि हुन्छ, जसलाई मेलानिन (melanin) भनिन्छ । यो पिग्मेन्ट आफैंमा पूर्ण कालो रंगको हुँदैन तर जब एकैठाउँमा यो पिग्मेन्ट बढी जम्मा हुन्छ, त्यस अवस्थामा छालाको रंग कालो देखिन्छ ।
माथिका तीन रंगहरु, सेतो, पहेंलो, कालो बाहेक हाम्रो छालामा रहने रक्तनलीहरुले गर्दा छालाको रंगमा रातोपन पनि थपिन्छ । मानिसको छालाको रंग मुलतः यिनै चार वटा रंगहरु– सेतो, पहेंलो, कालो र रातोको संयोजनबाट विभिन्न रंगको देखिन्छ ।
त्यसो त घामको किरणले हाम्रो छालामा मेलानिन उत्पन्न गराउँदछ । यही नै त्यो कारण हो, जसले गर्दा बढी घाम लाग्ने ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको छालाको रंग कालो हुन्छ । घाममा बढी काम गर्ने मानिसहरुको छाला डढ्यो भन्नु पनि यही मेलानिन बढी पैदा/सक्रिय भएकै कारणले गर्दा हो ।
प्रिमियर लिगमा एक जनामा कोरोना संक्रमण
सुनको भाउ घटेको छ
ग्यासको कृत्रिम अभाव सृजना
काठमाडौंमा सोमबार र मंगलबार ६०-६१ वर्ष उमेर समूहलाई खोप
युरोकप म्याच प्रिभ्यु : आज हुने ३ खेलका कुन टोली कस्तो?
काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा एक साता थपिए
शक्तिशाली देश हौ भन्ने राष्ट्र्हरुनै एक राष्ट्र चिन बिरुद्द एक युद्द मोर्चा बन्दि
प्रधान सम्पादक मो.नं.
ईमेल : scientificserver@gmail.com
प्रबन्ध निर्देशक : Mr. J
2021 . Scientific Organization